Montblanc dia manatevin-daharana ny lamaody marika lafo vidy hanombohana Smartwatches | Vaovao momba ny gadget
Montblanc dia manatevin-daharana ny lamaody marika lafo vidy hanombohana smartwatches
Andro vitsy lasa izay, TAG Heuer dia nanambara ny andiany faharoa amin'ny smartwatch, ny TAG Heuer Connected Modular, smartwatch modular izay azontsika ampanjifaina amin'ny fomba samihafa 500, amin'ny fampiasana fehy, buckles ary boaty mihitsy aza. Saingy tsy izy irery no orinasa manankarena izay mametraka ny lohany amin'ny tontolon'ny smarwatches, na dia amin'izao fotoana izao aza dia sonia mahomby indrindra amin'ny entana manokana, mivarotra 56.000 singa ny maodely teo aloha, fahombiazana ho an'ny orinasa. fahombiazana izay tsy nolazain'izy ireo mialoha akory. Montblanc dia nanolotra ny Montblanc Summit, smartwtach izay hotantanan'ny Android Wear ihany koa, mamela ny andrana ataon'i Swatch miaraka amin'ny rafitra fiasa misy azy.
Tsy toy ny maodely TAG Heuer, maodely nokarakarain'ny processeur Intel, niankina tamin'ny orinasa ny orinasa Qualcomm, mampiditra ny Snapdragon Wear 2100, miaraka amin'ny RAM 512 MB sy tahiry anatiny 4 GB. Izy io koa dia tsy tantera-drano noho ny fanamarinana IP68. Ny bateria dia teboka ratsy, satria 300mAh ihany no anolorany antsika, na dia araka ny filazan'ny mpanamboatra aza, mihoatra ny ampy hahafahana mody any an-trano sy hikarama azy amin'ny alina, miaraka amin'ny charger magnet izay atolotry ity maodely ity. Ny efijery AMOLED 1,39-inch dia voaaro amin'ny vera safira ary manana famahana 400 × 400.
Fa efa natao anaty lafarinina, ny orinasa dia mety afaka nanampy chip NFC sy GPEny, izay ireo teboka ratsy hitantsika amin'ity maodely ity, maodely izay manana sensor tahan'ny fo optika, zavatra izay tsy misy amin'ny maodely TAG Heuer. Mazava fa tsy orana araka ny filan'ny besinimaro foana izy io, fa modely ho an'ny akanjo ny lojika, ireo tovolahy avy ao amin'ny TAG Heuer dia tsy nahita mendrika ny hampihatra izany, na dia tsy dia be loatra aza izany.
Mikasika ny vidiny, ny Montblanc Summit dia hamidy $ 890 amin'ny kinova fototra. Raha mila corra vy isika dia tsy maintsy mandoa vola 50 euro fanampiny. Ny tadiny dia 22 mm, ka tsy ho olana ny mampiasa tadiny izay hitantsika eny an-tsena ary mifanaraka amin'ny tsirintsika, raha mbola manam-bola hividianana ity smartwatch lafo vidy ity, maodely iray izay mora vidy kokoa noho ny TAG Heuer Connected Modular, izay ny vidiny dia 1.350 euro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » Gadgets » SmartWatch » Montblanc dia manatevin-daharana ny lamaody marika lafo vidy hanombohana smartwatches
BMW dia nilaza fa ny fiara mizaka tena 5 dia hiakatra amin'ny tsena amin'ny 2021